Sawiro: Maxay aheyd ballantii ay lahaayeen Shariif Xasan, Axmed Madoobe, Cosoble taasoo keentay inay Muqdisho kula kulmaan Boris Johnson - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Maxay aheyd ballantii ay lahaayeen Shariif Xasan, Axmed Madoobe, Cosoble...
Sawiro: Maxay aheyd ballantii ay lahaayeen Shariif Xasan, Axmed Madoobe, Cosoble taasoo keentay inay Muqdisho kula kulmaan Boris Johnson
Muqdisho (Caasimada Online)-Xoghayaha Arrimaha dibadda ee dowladda Ingiriiska Boris Johnson ayaa maanta kulan horey loo qorsheeyey Muqdisho kula yeeshay qaar ka tirsan maamula Goboleedyada dalka oo si deg deg ah usoo gaaray Magaalada Muqdisho.
Madaxweynayaasha soo gaaray Muqdisho ee maanta la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ingiirka waxay kala ahaayeen madaxweyneha Jubbaland Axmed madoobe, Koofur Galbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan iyo Hirshabeelle cosbole.
Kulankaan oo ahaa mid horey loo balamiyey ayaa ka dhacay safaaradda ay ingiriiska ku dhex leedahay xarunta Xalane ee garoonka Muqdisho, waxayna l isugu soo hadal qaaday sidii ay dowladda Ingiriiska maamul Goboleedyada uga caawin laheyd dhincyada dhinacyada horumarinta iyo kaalmada bani’aadanimo.
Boris Johnson ayaa marka hore wax lagu farxo ku tilmaamay inuu kulan la qaato qaar kamid ah madaxda maamul Goboleedyada dalka , isagoo hoosta ka xariiqay in dowladda Ingiriiska ay sii wadi doonto kaalmada maamulada ka jira dalka gaar ahaan soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha oo maamulada dalka ay ka caawin doonto sidii looga horumarin lahaa dhinacyada caafimaadka, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, dib u dhiska guud, iyo amniga.
Madaxweynayaashaan oo la ballansanaa wasiirka Arrimaha dibada UK ayaa si lama filaan ah uga soo dagay garoonka Aadan Cadde waxayna durba ku xaroodeen safaarada Ingiriiska si ay kulankaas uga qeyb galaan.
Ballanta ka dhaxeysay ayaa aheyd sidii ay lacag iyo mucaawino uga codsan lahaayeen wasiirka Arrimaha Dibadda UK, wuxuuna kulankaan ahaa mid qorsheysan oo laga soo shaqeeyey.